I-Himalayan Recluse, phakathi eCorbett n Ranikhet
Ifakwe kwihlathi lepine, elinombono we-180 degrees we-Himalayas, le ndawo inomtsalane ozolileyo. Ilungele iintsapho, iibhayisekile, ababhali, abafoti, iYoga kunye namaqela okucamngca.
Indawo efanelekileyo yokufota iindibano zocweyo zokufota, iindibano zocweyo zenzululwazi ngeenkwenkwezi, ukumiswa kohambo lokuhamba ngebhayisekile, ukubaleka kweentaba, iindibano zocweyo zeyoga kunye nokucamngca, iholide yokuncipha, uhambo lokuloba okanye ukuhlala ixesha elide.
I-Himalayan Recluse yipropathi epholileyo ye-boutique apho abantu banokuhlala ngaphandle kokuphithizela kubomi besiqhelo. Banokuchitha ixesha elizolileyo bebukele ukuphuma kwelanga kunye nokutshona kwelanga kunye nembono ye-Himalayas enamandla, okanye bahambe bejikeleza kwiindawo ezinjengeTempile yaseBhowna Devi, iTempile yeKalika Devi okanye ipikniki kumlambo iRamganga.
Uhambo olude kumahlathi epayini, ukuphuma kwelanga okumangalisayo kunye nokutshona kwelanga, ubuso ngobuso kunye nee-Himalayas ezinamandla kunye nokusondela kwindalo zizinto ezenza ubomi bukhethekileyo apha.
Iyafumaneka efowunini, kuwhatsapp okanye ngokobuqu.